यस वर्ष थप सात दिन सार्वजनिक बिदा ! – Annapurna Post News
April 21, 2022 sujaLeaveaComment on यस वर्ष थप सात दिन सार्वजनिक बिदा !
सुर्खेत, ८ वैशाख-कर्णालीमा यो वर्ष थप सात दिन सार्वजनिक बिदा हुने भएकाे छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले प्रदेशभर लागु हुनेगरी सात दिन पर्व र दिवस बिदा दिने निर्णय गरेको हो । धान दिवसको बिदा १५ असारमा जुम्लाबाहेकका नाै जिल्लामा मात्रै लागु हुनेछ भने जुम्लामा १२ चैतमा बिदा हुनेको छ ।
यिनै हुन् आफ्नै पेटमा गो’ली हा नेर ज्यान गुमाएकी सैनिक जवान कोपिला-आफैँलाई गो’ली हानेकी कपिलवस्तुस्थित शमशेरदल गणमा कार्यरत सिपाही कोपिला राजवंशीको मृ’त्यु भएको छ। कपिलवस्तु जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी जेसी शाहका अनुसार भैरहवा मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा बिहान उनको मृ’त्यु भएको हो।
अब कोपिला कहिल्यै यसरी मुस्कुराउने छैनन्